गाउँले केटाहरुले हरेक रात गर्छन् मायालाई यस्तो,माया भने प्रतिकार गर्न सक्दिनन्(भिडियोसहित) – Khabar Chautari
गाउँले केटाहरुले हरेक रात गर्छन् मायालाई यस्तो,माया भने प्रतिकार गर्न सक्दिनन्(भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति: आइतबार, पौष १९, २०७७ समय: ७:०८:००
सुर्खेत । लेकबेसी नगरपालीका वडा नं. १ को जहरे भन्ने ठाउँमा एउटा यस्तो कथा छ । जुन कथा कल्पनिक होइन । जुन कथा परिकल्पना गरिएर कोरिएको होइन । यो वास्तविक मानिसको वास्तविक कथा हो । जस्मा दुःख उस्तै छ । पिडाको त के कुरा गर्नु ? सही नसक्नु नै छ । साहारा, सहयोग र साथको पर परसम्म कुनै नाता छैन । यो कथा हो बाबु र छोरीको कथा । जुन कथा मार्मिकता अलिअलित मात्र हैन पुरै जुनी भरिलाई पुग्नेगरी भरिएको छ ।
एउटा सानो झुप्रो जस्मा सानो भन्दा पनि अति नै सानो परिवार । जुन परिवारमा केवल बाबा र छोरीको मात्रै बसाई छ । आमाले सानैमा ती छोरी मायालाई र श्रीमानलाई छोडेर अर्कैसंग बिहे गरी गएपछि माया एक्लो मात्र बनीन् । उनी साहारा बिनाको जीवन जिउँदै छिन् । उनको पुरा नाम हो माया बुढा मगर । उनी उमेरले अहिले २० वर्ष लागेकी छन् । तर उनको मानसिक अवस्था भने सामान्य मानिसको जस्तो छैन । उनी सुस्त मनस्थितिकी माया हुन् ।
उनै मायाका बाबुको कुरा गर्ने हो भने उनी केवल एक्लो मायाको आफन्त हुन् जो नातामा मायाको आफ्नै बुवा हुन् । तर माया बुवा जीउँदै हुँदाहुँदै पनि आफ्नै घरमा असुरक्षित छिन् । मायाकोलागी हेरक दिन पनि रात जस्तै छ । रात झन् रात नै भैहाल्यो । मायाको बुवा गंग बहादुर जुन सुकै समय र ‘क्सिको तालमा मा’तिरहेका हुन्छन् । उमेरले ५६ जति लागेका गंग बहादुर गाउँमा जहाँ काम गर्न जान्छन् उतै र क्सिले मा’तेर कि त रात बिताई दिन्छन् कि त मा’तेरै घरमा राती आउँछन् ।
​छोरी सुस्त मनस्थितिकी छ म समयमै घर जानु पर्छ भन्ने सोंचाई गंग बहादुरमा कहिल्यै आएन । आएको हुँदो हो त सायद माया गाउँका केटाहरुबाट असुरक्षित हुनु पर्ने थिएन । गाउँलेले त यति सम्मको भन्ने गर्दा रहेछन् कि मातेको तालमा गंग बहादुरले पनि आफ्नै छोरी मायालाई शा’री’रि’क स’म्प’र्क गरेका छन् । यो कुरा कत्तिको साँचो हो त्यो उनै बाबु जानुन् । तर मायाको अवस्था हेर्दा जो कोहीको आँखा आँशुले रसाउँछ । आफुलाई जस्ले जे गर्दा पनि प्रतिकार गर्न नसक्ने मायाको दुःखदायी कथा यस्तो छ । भिडियोसहित